Warshadda Shiinaha ee loo yaqaan 'PVC Soft PVC Pin Badges' iyo soosaarayaasha | SJJ
Musmaarrada jilbaha PVC ee jilicsan ayaa aad u jilicsan, midab leh & khafiif ah. Calaamadaha PVC ee gaarka ah waxay aad ugu fiican yihiin badeecadaha sumadaynta xayeysiinta, oo lagu heli karo laba heer, naqshado 3D ah iyo astaan ​​daabacan hab caado u gaar ah.
Calaamadaha biinanka waxaa badanaa loo adeegsadaa waqtiyo kala duwan sida dugsiyada, xafladaha, dallacsiinta, hadiyadaha ama hadiyadaha. Haddii aadan jeclayn calaamadaha birta qabow ee birta ah, calaamadaha jilicsan ee loo yaqaan 'PVC pin' waa alaabta aad dooranayso. Baararka jilicsan ee PVC -ga ayaa ka jilicsan jilicsanaanta gacanta waxayna ka iftiimayaan midabada marka loo eego summada biraha biraha. Naqshado badan oo ka mid ah calaamadaha PVC ee jilicsan ayaa ah tirooyinka kartoonada, sidaa darteed waxaa soo dhaweeyey carruurta iyo waalidkood. Calaamadaha waxaa lagu beddeli karaa faahfaahin yar sida buuxinta midabka, daabacaadda dhejiska dhejiska ah iyo wixii la mid ah. Cabbirku wuxuu noqon karaa mid yar ama weyn, qaabab ayaa loo samayn karaa si waafaqsan codsigaaga.
Summadaha jilicsan ee PVC ee jaban ayaa ka jaban oo ku habboon dallacsiinta. Qaybaha buuxa ee Baakadaha jilicsan ee PVC oo leh jilayaal kala duwan ayaa caan ku ah dhalinyarada marka loo eego urur ama dhisme kooxeed. Calaamadahayaga jilicsan ee PVC ee jilicsan waa deegaan, waxay gudbin karaan dhammaan noocyada shuruudaha imtixaanka. Waxay dabooli doontaa dalabkaaga qiimayaasha kaliya laakiin sidoo kale tayada. Qiyaaso kala duwan oo kala duwan ayaa la soo dhaweynayaa, amarada waaweynna waxay heli doonaan qiimayaal ka sii wanaagsan.
Waxsoosaarka summadaha biinka ee PVC ee jilicsan ayaa lagu dhammayn karaa waqti gaaban oo leh tayo sare leh. 1 maalin farshaxanka wax soo saarka, 5 ~ 7 maalmood muunado, 12 ~ 15 maalmood wax soo saarka. Tani waxay kaa caawin doontaa wax badan oo ku saabsan kordhinta sumcadaha. Miisaanka fudud ayaa waliba kaa caawinaya badbaadinta kharashka dhoofinta. Adeegga ugu fiican ayaa isla markiiba la bixin doonaa mar kasta oo aan helno weydiimahaaga.
Ikhtiyaarrada Lifaaqa Caadiga ah: Birta ama PVC subagga duuliyeyaasha duuliyeyaasha, biinanka badbaadada, birlabyada, fur iyo lowska, iyo kuwa kaleba sidaad doonto
Xirxirida: 1pc/bac poly, ama sida codsigaaga
Hore: Jijjirada PVC ee jilicsan
Xiga: Calaamadaha PVC ee jilicsan
Calaamadaha Pin Custom
pin pin lapel ah
sumadaha biinanka caagga ah
calaamad pvc jilicsan
jilicsanaanta jilicsan ee pvc
Musmaarrada jilicsan ee PVC